လီဒိုလမ်းမကြီး | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » လီဒိုလမ်းမကြီး	24
Posted by ဘဲဥ on Jun 21, 2012 in My Dear Diary | 24 comments
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ကျော်ကြားခဲ့သော လီဒို-မြန်မာ လမ်းမကြီးမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထူးခြားထင်ရှားတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ လီဒိုလမ်းမကြီးဟာ တစ်တောင်ဆစ်ချိုး အကွေ့ပေါင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ကွေ့ ၊ ပေတစ်သောင်းကျော်နက်တဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေနဲ့ တောင်အသွယ်သွယ်ပေါ်မှာဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာ အမေရိကန်စစ်တပ်က ထရပ်ကားတွေက ဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် လက်နှက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ၊ အစားအစာနဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းအမြောက်အများသယ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ သမိုင်းဝင် လီဒိုလမ်းမကြီးက အန္ဒိယ ၊ မြန်မာ ၊ တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ် တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသောလမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်။
Khaing Khaing says: အဲဒီလမ်းမကြီးကဖွင့်ပြီးသားလားကိုဘဲဥ သွားရတာကြောက်စရာတော့ကောင်းမယ်နော်
ဘဲဥ says: မေမေ ဘယ်ပျောက်နေဒုံးဗျ
shwe kyi says: ကြောက်စရာကြီးရယ်။ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်မှာလားဟင်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဟုတ်တယ်ဘဲအုမရေ
သေရှာကြည့်တာ ကားလေးတွေ သွးနေတာတွေ့ တယ်..
ညလေး says: တိန်……အကွေ.ပေါင်းနှစ်ဆယ်များတောင်လား…..
Shwe Tike Soe says: အေးလေနော် …ကြည့်ရတာ အသည်းယားထာ…. ဖြေးဖြေးချင်းမောင်းရမှာပဲနော်…….
mamanoyar says: ကြောက်ကြောက်
ဘဲဥ says: ကြောက်ပါနဲ့ ဥဥလေးရှိဒယ်နော်
water-melon says: မြွေလိမ်မြွေကောက်လမ်းကလေးများ
ဘဲဥ says: ဟဲ့ဟဲ့ ဘိုက်ဘိုက်ကိုတော့ မမောင်းခိုင်းနဲ့နော် အဲ့ကောင်မက အချိန်တိုင်းမူးနေတာရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 292
Davit says: စာရေးဆရာနာမည်မေ့နေလို့ဗျ….. “မဟာလီဒို” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော့်မှာရှိတယ်…..လီဒို လမ်းမကြီးဖေါက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရေးထားတာလေ…. ဖက်လို့အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ….. နောက်နေ့ကျရင် စာရေးဆရာနာမည်နဲ့ ဒေါင်းလို့ရနိုင်မရနိုင် ….. ရနိုင်ရင်လည်း ဒေါင်းလို့ရမဲ့လင့်လေးကို ဒီ Post မှာပဲရေးတင်ပေးပါ့မယ်။
(ဖက်ရတာအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပါ………..ကျွန်တော်ဆိုဖက်တာ 10 ခေါက်လောက်ရှိမလားပဲ )
Davit says: ရေးတာကတော့ ဖိုးကျော့ဗျ……ဒေါင်းလို့ရနိုင် မရနိုင် ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ဘဲဥ says: ပါဝင်အားဖြည့်ပေးတာ ကျေးကျေးပါနော်
မောင်ပေ says: ဟယ် လမ်းမကြီး ပုံ ကြည့်ပြီး ယားတာ ။ အသဲပြောပါတယ် ဟီဟိ
kai says: အမှတ်မမှားရင်.. မြန်မာပြည်ထဲ..ဂျပန်ဝင်လာတာ.. အဲဒီလမ်းမကြီးကြောင့်ပဲ..
ဦးအောင်ဆန်းသွားခေါ်တော့.. ဂျပန်တွေက.. ချိုင်းနားကိုထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့.. အဲဒီလမ်းကို.. ဖြတ်တောက်ချင်လို့.. သူတို့တွက်ကိန်းနဲ့..သူတို့.. ဦးအောင်ဆန်းကိုလက်ခံခဲ့တာလို့.. မှတ်ဖူးတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၂လလောက်က.. နယူးယောက်ဖက်က.. နာမယ်ကြီးမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတယောက်ဖုန်းဆက်ပြီး.. အဲဒီလမ်းအကြောင်းကျုပ်ကို.. လာမေးတယ်..
ယူအက်စ်က.. စိတ်ဝင်စားနေတာ.. သေချာတယ်..
တခုခုတော့.. တခုခုပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 134
hein latt says: သေမင်းတမန် မာရဏလမ်းမကြီးဆိုလားပဲ…..လမ်းဖောက်တုန်းကလုပ်သားများစွာသေခဲ့လို.တဲ့…..။
kai says: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က.. ထိုင်းနဲ့…မြန်မာဆက်တဲ့.. ရထားလမ်းတခုရှိခဲ့ဖူးတယ်..
လမ်းဖေါက်ရင်း.. မြန်မာတွေရော.. စစ်သုံ့ပန်းတွေရော.. သောင်းချီသေခဲ့လို့လေ…။
Mလုလင် says: အဲ့ဒါကြီးကို ပြန်သုံးလို့ ရ/မရ .. စစ်နေကြပြီတဲ့ သူကြီးရေ့ …။
kai says: အဲဒီလမ်းကိုသာ.. ရှေးကျောက်မီးသွေးရထားနဲ့.. ရှေးအပြင်အဆင်တွဲနဲ့.. ပြန်မောင်းနိုင်အောင်လုပ်လိုက်ရင်.. ထိုင်းကိုတနှစ်ဝင်တဲ့.. တိုးရစ် ၁၂သန်းလောက်ရဲ့.. ၁၀ရာခိုင်နှုန်း… အဲဒီလမ်းကနေ.. .မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာမယ်.. အာမခံကြောင်း…
တိုးရစ်တယောက် ဒေါ်လာ၁၀၀၀ သုံးမယ်ဆိုရင်.. တနှစ်ဒေါ်လာ ၁ဘီလီယံ အပိုဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း..
..မှာဖြစ်ကြောင်း.. Was this answer helpful?LikeDislike 2722
kyeemite says: ဟုတ်ပ..ပုံထဲမှာရေကြည့်တော့
ရဲစည် says: လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကတော့ ရောက်ဖူးတယ် ဟိုဘက် ချီဗွေ-လောက်ခေါ်အထိပေါ့
ဒီလမ်းကြီးက ဒီနေ့အထိ ကောင်းကောင်းမွန်ရှိနေသေးတာ အံ့သြစရာပါ
MaMa says: အခုအချိန်မှာ အဲဒီလမ်းကို အသုံးပြုနေသေးသလား မသိဘူး။
ဓာတ်ပုံကြည့်ရတာတော့ ဟိုးတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ပုံထင်တယ်။
လေယာဉ်နဲ့ ရိုက်ထားတာလား မသိ။
ဒေးဗစ်ပြောတဲ့ “မဟာလီဒို” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဒေါင်းလို့ ရနိုင်ရင် လင့်ခ် ပေးပါဦး။
မရနိုင်ရင်လည်း ပြောလက်စနဲ့မို့ အားလုံးအတွက်
အလင်းဆက် တိမ်ယံသစ္စာကို တင်ပေးသလိုမျိုး
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရိုက်တင်ပေးလိုက်ပေ့ါ။ :D
ဘဲဥ says: သားသား ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်နဲ့သွားရိုက်ထားတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4992
သားဦး၊မြေးဦး says: စတီးဝဲလ် လမ်းမကြီး သို့ မဟုတ် သံမဏိ ပိုး လမ်းမကြီး ဆီကို ရောက်ဖူးအောင် သွားပါမည်။
Comments By Postမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - BMTM Mdy - BMTM Mdyပုညကြိယာဆယ်ပါး - အရီးခင်လတ်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေခရီးသည်လေးသို့ - လင်းဇော် ထက် - အရီးခင်လတ်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အရီးခင်လတ် - စနေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - မောင် ပေ - naywoon niဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - အရီးခင်လတ် - မင်းမင်းစည်တော်ကြီး - မောင် ပေစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - မောင် ပေ - Mr. MarGaစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - TNA - naywoon niအတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - cobra - ခင် ခEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62225 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59213 Kyats )MaMa (58007 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )